Akhriso: Al Shabaab Oo Sheegtay Mas'uuliyadda Weerar Lagu Dilay Xildhibaanno iyo Saraakiil Oo Ka Dhacay Duleedka Degmada Balcad.
Tuesday June 05, 2018 - 17:48:25 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in weerar dhabbagal ah oo khasaara badan dhaliyay loo dhigay kolonyo gaadiid ah oo ay la socdeen askar iyo saraakiil.
Sida ay xaqiijinayaan warar lahelayo ciidamada Xarakada Al Shabaab ayaa gacanta ku dhigay gaari Cabdi Bile ah iyo gaari Roneet ah oo ay la socdeen mas'uuliyiin katirsan maamulka 'Hirshabelle'.
Weerarka oo ka dhacay wadada xiriirisa magaalooyinka Balcad iyo Jowhar ayaa sababay dhimashada ugu yaraan 12 qof oo ay kamid yihiin laba xildhibaan ayaa lagu dilay weerarka.
War rasmi ah oo kasoo baxay Shabaabul Mujaahidiin ayaa lagu xaqiijiyay in laba gaari lagu qabsaday dagaalka islamarkaana 12 askar iyo saraakiil ah lagu dilay.
"Mujaahidiintu weerar kamiin ah ayay udhigeen gaadiid ay la socdeen xidlhibaanno katirsan golaha dawaaqiidda maamulka Ridada Hirshabelle waxay ku dileen laba xildhibaan iyo 10 askari laba gaarina waa qaniimeysteen iyo saanado hub ah" ayaa lagu yiri war kasoo baxay Al Shabaab.
Mas'uuliyiinta weerarka lagu dilay ayaa kala ah
1-Daahir Mukhtaar Cabdulle Xildhibaan
2- Xildhibaan Ismaaciil Muumin Hilowle Xildhibaan
3-Muuse Afweyne guddoomiye ku xigeenkii degmada Raaga Ceelle
Waxaa kale saraakiisha lagu dilay weerarka kamid ah taliyiihii ciidamada ilaalada xildhibaanadaas oo lagu magacaabi jiray Xassan Dhegey islamarkaana ahaa taliyaha gaarka ah ee ciidamada madaxweyne ku xigeenka Hirshabelle.
Wararka ayaa intaas ku daraya in ciidamada Al Shabaab ay gubeen labadii gaari oo ay dagaalka ku qabsadeen kadib markii ay cilladoobeen, sidoo kale Al Shabaab waxay daabusheen dhammaan hubkii ay wateen ciidamadii ilaalada u ahaa mas'uuliyiinta lalaayay waxaana kamid ahaa laba qori nuuca loo yaqaan PKM.
Waxaa xusid mudan in goobta weerarka dhabbagal ah uu ka dhacay ay ku dhowdahay saldhigga ciidamada AMISOM oo kuyaal halka loo yaqaan Haanta Sheekh ee duleedka degmada Balcad.
Waa Weerarkii ugu khasaaraha ee badnaa ee ka dhaca wadada xiriirisa degmooyinka Balcad iyo Jowhar tan iyo wixii ka dambeeyay Bishii March ee sanadkaan xilligaas oo weerar dhabbagal ah lagu burburiyay kolonyo katirsan gaadiid ah wateen ciidamada AMISOM.